Ezopolitiko | Ucanzibe 2022
Sala kakuhle ku-Adderall Oko: Ukwahlukana kombhali omnye kunye neziyobisi zakhe azikhethileyo
Udidi Ezopolitiko 2022
DEAR ADDERALL, bendicinga ... kufuneka sithethe. Oku kuye kwaphuza umzuzwana, kodwa kwafika entloko ngolunye usuku. Umhleli kunye nam sasinokufa kancinci emva kwe-ofisi malunga nesiqwenga endandisipapashe ngezolo. Uyayazi enye.
Masiyeke ukuLwa ukuTshipha: Abafazi ayingawo amaxhoba aphambili eMfazwe
Kwaye apha sinelinye ilinge lokunciphisa ukubandezeleka kwabantu.
Ngubani-okanye Yintoni-Ngaba iMole ye-FBI yayisentliziyweni yePhulo likaTrump?
Ii-feds zibanga ngokungacacanga ukuba zazi okuninzi ngemfihlo eyimfihlo kaMongameli uDonald Trump waseKremlin. Yintoni ebangela imfihlakalo yokuhlola apha? Yazi kangakanani i-FBI kwaye iyazi njani? Ekugqibeleni, sinamanqaku angaphezulu.
Inkundla igweba iDNC yayinelungelo lokufumana iiPrimaries ngokuchasene neSanders
Inkundla iqinisekisile ukuba i-DNC kunye noDebbie Wasserman Schultz babambe icala elithandekayo ukuze bathande uHillary Clinton.
U-Keith Ellison ulahla abaxhasi be Sanders kubaxhasi ababuyileyo
I-congressman yaseMinnesota izimisele ngakumbi ukwamkela ukusekwa kunokuba icele umngeni kuyo.
Ikholeji yoNyulo Eyona nto imbi kunokuba ucinge-Nasi isizathu
Kabini kwinkumbulo yamva nje, umntu onyulwe njengomongameli waphulukana nevoti ethandwayo kodwa waphumelela ubongameli kwiKholeji yoNyulo. Abantu baseMelika bakwamkela oku ngaphandle koqhanqalazo olunentsingiselo. Asifanelanga ukuba nayo.
‘Akukho Ntandabuzo’ uMongameli Obama UngumSilamsi, uSihlalo wePhulo likaDonald Trump waseNew York uthi
'Engqondweni yomndilili waseMelika, akukho mathandabuzo ukuba ungumSilamsi, utshilo uCarl Paladino. 'AkangomKristu.'
Akukho Zindawo zingaphaphazeliyo eSyria-Yadalwa iRussia
UPutin ufake i-multi-layered, i-missile shield ekwaziwa ngokuba yi-'Integrated Air Defence System 'ngaphaya kwe-Syria.
URodriguez-Gregg uphuma kwiRace Assembly
URodriguez-Gregg, inkwenkwana eyonyukayo yeRiphabhlikhi, wayejamelene nezityholo zokuqhuba ngelixa enxilile, ukuphazamiseka kunye nolunye ulwaphulo mthetho.
Ngaba ukuNgqinisisa kukaLaura Bush kukutywina i-Deal kaHillary Clinton?
Ukwamkelwa okungalindelekanga kwilungu elidumileyo kodwa elilumkileyo losapho lakwaBush kusenokwenzeka ukuba lipakishe udonga lwezopolitiko
Imbali ehlaziyiweyo yeLapel Pin Politics
Ipini yeflegi ayisanyanzelekanga kubagqatswa baka-Mongameli. Nanku ukujonga kwimbali ye-lapel pin kwipolitiki kaMongameli.
I-Trump Clobbers uStephanopoulos ngefowuni
ULindsey Graham uchaza iqonga lomkhankaso kaDonald: 'populism, xenophobia, race-baiting and inkululeko.'
Abantu abaninzi baseMelika balwa kwi-American Revolution kunokuba sasicinga
Abaseki bethu balwa nzima, eyaziwayo imfazwe yenkululeko.
Inguquko yokuVota ukusuka ekubaleni iiBhontshisi ukuya kwiKompyutha
Ngelixa ukuvota bekusoloko sisenzo sobumi baseMelika, inkqubo yokuvota eMelika iguqukile ngokuhamba kwexesha, amaxesha amaninzi ngaphandle kwengxabano.
Izikolo eziHanjiswe nguMoya woMntwana ongasekhohlo emva koMthetho
Inye kuphela into ecacileyo: singcono ngaphandle kovavanyo olusemgangathweni olusemgangathweni esithe salibona kwi-NCLB.
UBernie Sanders Won Ingxoxo kaTrump-Clinton
Ukuba iiDemokhrasi zonyule uBernie, wayeza kumbetha uTrump nge-15.
IBernie Sanders Rocks iBronx
UBernie weza kwiBoogie Down.
UJames Madison wayenyanisile malunga ne-Conservatives-Nantsi into ayithethileyo
Kuyinyani ukuba abantu abazizo iingelosi. Kuyinyani ukuba amadoda enza urhulumente.
Ukukhanyela i-America's Islamist Terror Problem ayenzi ukuba ihambe-kuyenza ibe mbi ngakumbi
Ukukhutshwa kwe-FBI kweefowuni zeMateen 911 kungqina ukuba yeyiphi imithombo yeendaba kwaye urhulumente akafuni kuyamkela
Le Mifanekiso yeCentral Park kwezinye iidolophu iya kukukhwankqisa
Sisebenzisa isoftware yemephu, sithumela iCentral Park eWashington DC, eLos Angeles, eParis Monaco naseAmazon.
I-Bugatti eNtsha kaTracy Morgan ayinakuphinda ibuye kwiNgozi yangoLwesibini
Yonke into ekufuneka uyazi malunga 'nokuhamba kwabafileyo' Phambi kweNkulumbuso yexesha eliphakathi
Ingqondo ye-Bulletproof: I-6 Iimfihlelo zokuqina kwengqondo evela kwi-SEALs SEALs
Ayinakuqhekeka nge-20: Ukuqonda M. Night Shyamalan's Superhero Classic
uyithengisa phi igolide yakho
usweleke njani ujerry lewis
Isigcawu esibomvu somntu obuyela ekhaya
ibonakala njani ubumnyama obumnyama
hacker kwindlu yamakhadi
luza kwenzeka nini uqoqosho olulandelayo